ကျောင်းဆောက် နှင့် ဘုရားတည် ဘယ်ဟာ အကျိုးပို ပါသလဲ? – Update News
ကျောင်းဆောက် နှင့် ဘုရားတည် ဘယ်ဟာ အကျိုးပို ပါသလဲ?
admin · Posted on November 14, 2021 November 14, 2021
သံဃာကိုကျောင်းဆောက်လှူတာနဲ့စေတီတည်တာ ဘယ်ဟာပို အကျိုးများလဲစေတီတစ်ဆူတည်ပြီးတော့ ဘုရား ကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုလို့ ဗုဒ္ဓပူဇာတော့ဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ လှူလိုက်တာ လောက် ဒီသာသနာတော်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိ စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်
စေတီလှူတယ် ဟုတ်ပြီလမ်းသွားလမ်းလာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘုရားကိုရှိခိုးမယ် လက်အုပ်ချီကြတယ် ကုသိုလ်ရကြမယ် မှန်တယ် ဒီလောက်ပဲ စေတီတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း ဘုရားကို အာရုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရမယ် ဟုတ်တယ် အဲလောက်ပဲရမယ် ကျောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်လှူလို့ရှိရင် ဘုရားကို ပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်တရားကိုပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်သံဃာကိုပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်
ရတနာသုံးပါးလုံးပူဇော်ပြီးဖြစ်ရုံမျှမက သာသနာတော်အဓွန့်ရှည်ကြာဖို့ မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပြီးတော့ အကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ် အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေရမယ် ”ဘုရားထက်မြတ်တယ်”လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အကျိုးဖြစ်တာကိုပြောတာနော်
မြတ်စွာဘုရားက စေတီတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာကို ကုသိုလ်မရဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ရတယ်ဘုရားကိုပူဇော်တာမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး ကောင်းတယ်အကျိုးကိုတွက်ကြည့်လိုက်ကျောင်းဆောက်လိုက်ရင်ဘုရားပါတယ် အဲဒီထဲမှာနော်ဘုရားရုပ်ပွား တော် ထည့်သွင်းပူဇော်ထားတယ်
ဗုဒ္ဓပူဇာ သံဃာတွေသီတင်းသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုသံဃာတွေ သင်ကြားနေတဲ့တရား ဓမ်မပူဇာသံဃာတွေကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့သံဃာ့ပူဇာစေတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓပူဇာတစ်ခုပဲရနိုင်တယ် ဓမ္မပူဇာမရနိုင်ဘူး သံဃာ့ပူဇာမရနိုင်ဘူးဘာပြုလို့တုန်းဆို စေတိယစေတီကအာရုံပြုလို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်
အခုလို စာပေကျမ်းဂန်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ သံဃာတွေ သီတင်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူရတာဟာသာသနာတော် အတွက် အင်မတန်မှအကျိုးဖြစ်တယ် ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဝေလာမသုတ္တန်မှာသံဃာကိုကျောင်းဆောက် လှူဒါန်းတာဟာ ပိုကောင်းတယ် ဆွမ်း သင်္ကန်း ကျောင်း ဆေး ဆိုတဲ့အလှူဟာ ပိုကောင်းတယ်တဲ့နော်
ဘာပြုလို့လဲဆိုရင် အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းဆောက် လိုက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓပူဇာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေသင်ယူပို့ချနေသည့်အတွက်ကြောင့် ဓမ္မပူဇာလည်းဖြစ်တယ်သံဃာတွေသီတင်းသုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့် သံဃာ့ပူဇာလည်း ဖြစ်တယ် ဒါတင်လားလို့ဆိုတော့ မကဘူးသံဃာတွေကအဲဒီကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးပြီးတော့(Generation to Generation) မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို သင်ကြားပို့ချပေးလိုက်လို့
နောက်တစ်ဆက်က ထပ်ပြီးတော့ သင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရား ရဲ့တရားတော်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ယူသွားတာပဲ ရှေးတုန်းကလည်း ဒီစနစ်နဲ့ သင်ယူလာလို့ ခု (၂၆၀၀)ထိအောင်တရားတွေ မပျောက်မပျက်တာ အကယ်၍ မသင်ပဲနေမယ်ဆို လို့ရှိရင် ပျောက်သွားတာကြာလှပြီ ဘယ်သူမှ အဓိပ္ပါယ်မဖော်နိုင်တော့ဘူး အဲတော့သာသနာရှည်ကြာဖို့အတွက် တို့လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ဟာ အင်မတန်မှ အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ရမယ်.။ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီးစေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့်မျှဝေပူဇော်ပါသည်။ဓမ္မရေချမ်းစင်